गोविन्द केसीलाई आजै काठमाडौँ ल्याउने तयारी | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
गोविन्द केसीलाई आजै काठमाडौँ ल्याउने तयारी
काठमाडौं । गोविन्द केसीलाई आजै काठमाडौँ ल्याउने तयारी, शिक्षामन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै, जुम्लामा अनसन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले आज काठमाडौँ ल्याउने भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक बसेर बुधबार अबेर डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउने र उनका मागबारे खुला छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशअनुसार विधेयक ल्याउनु पर्ने लगायतका माग राखेर डा. केसी जुम्लामा अनसनरत छन् । समाचारपत्रमा खबर छ ।
केसीका जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै आजै नै हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याउन पहल गर्ने निर्णय भएको छ । यही विषयमा जानकारी दिन अहिले बिहान ८ बजे शिक्षमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छन ।
अदभुत बालक जो नहेरीकनै अक्षर पढ्छन्,रङ पत्ता लगाउँछन्,मान्छे चिन्छन्।
समाचारगोविन्द केसीलाई आजै काठमाडौँ ल्याउने तयारी
आँशुमा डुब्यो ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ को पहिलो भाग
सिकिस्त बिरामी नै छाडेर जब चिकित्सकहरु काठमाडौंको सडकमा उत्रिए